खेलकुद Archives - Page3of 63 - Online Majdoor
सय मिटर महिला दौडमा स्वागत प्रथम
भक्तपुर, १० फागुन । भक्तपुर नपाको आयोजनामा भएको अन्तरनगर एथ्लेटिक्स प्रतियोगिताअन्तर्गत शनिबार सम्पन्न १०० मि. महिला दौडको फाइनल गेममा भक्तपुर नपाका स्वागता खाइजू प्रथम, भक्तपुर नपाका प्रकृति सुवाल द्वितीय, र ललितपुर मनपाका सुप्रिया रजक तृतीय हुन सफल भए । १०० मि. पुरुषतर्फको दौड फाइनल गेममा ललितपुर मनपाका आशिष खत्री प्रथम, भरतपुर मनपाका भुवन महतो द्वितीय र भक्तपुर […]
तेस्रो हाप्किडो रेफ्री सेमिनार तथा डन बेल्ट सम्पन्न
बुटवल, ९ फागुन । नेपाल मार्शल आर्ट्स हाप्किडो सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजना बुटवलमा र्राष्ट्रिय मार्शल आर्ट्स हाप्किडो रेफ्री सेमिनार तथा डन बेल्ट टेष्ट कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले गर्नुभयो । कार्यक्रममा सभामुख घर्तीले खेलकूदलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा क्रमशः परिवर्तन आएको छ, कुनै बेला खेल तथा खेलाडीलाई तिरस्कार गर्ने […]
अन्तरनगर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उद्घाटन
भक्तपुर, ८ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले बिहीबार एक विशेष समारोहबीच अन्तर नगर एथलेक्टिस प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगितामा पार्टी अध्यक्ष बिजुक्छेँले खेलाडीहरूमा विदेशी आक्रमणविरूद्ध पनि लड्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ भन्नुभयो । स–साना र कमजोर स्वाधीन तथा सार्वभौम देशमा साम्राज्यवादी देशहरूले आक्रमण गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले नेपाली जनता […]
भक्तपुर, ७ फागुन । ख्वप्रिङ इङ्कलिश एकेडेमीले आफ्नो २० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा भएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित दोस्रो ख्वप्रिङ कप उपत्यकाव्यापी अन्तरविद्यालय बुद्धिचाल प्रतियोगितामा बीएन एकेडेमी, काठमाडौँले दुई स्वर्ण र एक रजत जित्न सफल भएको छ । बुधबार सम्पन्न तेस्रो, चौथो र पाँचाँै चरणका खेलहरूमा ११ वर्षमुनि छात्रतर्फ बीएन एकेडेमीका आलोक चौधरी ४.५ अङ्गका साथ प्रथम, बीएन […]
दोस्रो ख्वप्रिङ्ग कप बुद्धिचाल सुरु
भक्तपुर, ६ फागुन । ख्वप्रिङ्ग इङ्गलिश एकेडेमीको २० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित दोस्रो ख्वप्रिङ्ग कप उपत्यकाव्यापी अन्तरविद्यालय बुद्धिचाल प्रतियोगिता मङ्गलबारबाट सुरु भयो । प्रतियोगिताको उद्घाटन वाग्मती प्रदेश बुद्धिचाल सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानकृष्ण प्रजापति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिले चेसको गोटी चाली संयुक्तरूपमा उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश बुद्धिचाल सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानकृष्ण प्रजापतिले सङ्घले निकट भविष्यमा […]
अन्तरनगर एथ्लेटिक्स प्रतियोगिता फागुन ८ बाट
भक्तपुर, ६ फागुन । भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा फागुन ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म हुने अन्तरनगर एथ्लेटिक्स प्रतियोगिताबारे मङ्गलबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले निर्वाचनको समयमा भक्तपुरका जनताबीच व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सिलसिलामा भक्तपुर नपाले हरेक वर्ष खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको बताउनुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुदलाई संविधानको मौलिक हकको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै […]
काठमाडौँ, ६ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को एकदिवसीय बरियतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको छ । आईसीसीले जारी गरेको बरियताअनुसार नेपाल १६ औँ स्थानमा उक्लिएको छ । यसअघिको बरियतामा नेपाल १७ औँ स्थानमा थियो । हालै नेपालले घरेलु मैदानमा विश्व क्रिकेट लिग दुईमा आफ्नो प्रदर्शनमा सुधार गरेका कारण एक स्थान माथि उक्लिन सफल भएको हो । लिग दुईमा […]
काठमाडौँ, १ फागुन (रासस) । विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फूटबलअन्तर्गत आफ्नो लिगको अन्तिम खेलमा सहज जीत हात पारेको छ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहीबार भएको खेलमा पुलिसले फ्रेण्ड्स क्लबलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै सहज जीत हात पारेको हो । पुलिसको जीतमा जुमानु राईले ह्याट्रिक गरे । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको […]